विवश आमाहरूको कथा कहिलेसम्म लेखिरहला यो समाज ?
१२०९ पटक पढिएको
आजभन्दा तीन वर्ष अगाडि मेरो दैनिकी भन्नु सामुदायिक अस्पताल र घरको चौघेरा थियो । अहिले केही अन्तर भएको छ । समाजका विभिन्न पात्रहरूलाई सक्दो नजिकबाट चियाउनु एउटा ऐच्छिक पाटो बनेको छ । करीब १७÷१८ वर्ष अगाडि ब्रेक लागेको अध्ययनलाई चलाउने उत्साह पलायो ।
पहिले अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र मेरो विषय थियो । अहिले समाजशास्त्र विषय पढ्ने अवसर मिल्यो । विश्वका प्रख्यात समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्रीहरूले गहन रूपमा गरेको वर्षौंको समाज अध्ययनबाट प्रतिपादन भएका सुक्ष्म र बृहत सिद्धान्तहरूलाई अध्ययन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य पर्दोरहेछ । जुन मेरो जस्तो चानचुने दिमागको बसको बात होइन । तर पनि रिपोर्ट बनाउनै पर्ने । बीए पहिलो र दोस्रो वर्षको कनीकुथी बनाएँ तर तेस्रो वर्षको रिपोर्ट बनाउने क्रममा अध्ययनको विषय र शीर्षक छनोट गर्न मुस्किल भयो ।
भेटघाटको क्रममा एक दिन यस्ती आमालाई भेटेँ जो २१ वर्षको कलिलो उमेरमा बिधवा भएर गर्भे टुुहुरी सन्तान पालेर बसिन् । जिन्दगीमा अनेकौँ तिरस्कार, अपहेलना र हिंसाहरू सहिन् । हण्डर र ठक्कर खाइन् तर त्यसको कत्ति पनि पर्वाह नगरी सन्तानको स्याहार र लालनपालनमा आफ्नो जिन्दगी र जवानी उत्सर्ग गरिदिइन् ।
उनलाई वर्षाैंअघिबाटै चिन्थेँ तर उनको जिन्दगीका भोगाइहरूलार्इृ नियाल्ने कोशिस गरेकी रहेनछु । उनको कथा छुट्टै छ । कुनै बेला त्यसलाई अक्षरमा उतार्ने कोशिस गर्नेछु । जुन कथा उकेल्ने कोशिस यस अघि कहिले गरिनछु ।
यस्ता हजारौँ आमाहरू छन् हाम्रो समाजमा जो छातीभित्र कहालीलाग्दा भोगाइको महाभारत अटाएर हिँडिरहेका रहेछन् । तिनै आमाहरूलाई देखेर उनीहरूजस्तै बिधवा वा एकल आमाहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने निधो गरेँ । अनि त्यस्ता आमाहरूको खोजी गर्न निस्किएँ घर, गल्ली र बस्तीहरू चहार्दै । अधिकांश आमाहरू सन्तानको भविष्यलाई नै सर्वाेपरी ठानेर जीवनमा लाम लागेका बग्रेल्ती समस्या र चुनौतीहरूसँग पाँैठेजोरी खेल्दै पुनः विवाह नगरी बसेका भेटेँ । उनीहरूको कथा, व्यथा, साहस र सङ्घर्ष सुनेँ । आमाप्रति नतमस्तक भएँ म । ती सन्तानहरूको तर्फबाट मनमनै कृतज्ञता चढाएँ ।
यहाँ आमाहरूलाई सम्मान दिनुको साटो निन्दा गर्न अग्रभागमा उभिएको छ अहिलेको शिक्षित समाज । जसको उदाहरण आमाको नाउँमा नागरिकताको विषयमा संसदमा चलेको बहस र त्यहाँ व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरूलाई लिन सकिन्छ । आमाको नाममा नागरिकता दिँदा समाजमा व्यभिचार बढ्छ, वेश्यावृत्ति मौलाउँछ, देश नाशिन्छ, समाज भाँडिन्छ, विदेशीका सन्तानले नागरिकता पाउँछन् भन्नेजस्ता सदाचारका पाठ सिकाउन खोजे । जुन पितृसत्ताको एउटा गतिलो उदाहरण हो ।
के महिला एक्लैले गरेर हुुने हो वेश्यावृत्ति ? व्यभिचारी महिला मात्र हुन्छन् ? पुरुष हुदैनन् ? आमाको नामबाट नागरिकता बनाउने सबै विदेशीका सन्तान हुन् ? ‘मातृदेवो भव’ भनेर आमालाई सम्मान गर्ने हाम्रो राष्ट्रका जननायकहरूलाई यो प्रश्न गर्न मन लाग्यो कि आमाको नाममा नागरिकता दिँदैमा देश र समाज भाँडिन्छ ? कहिले आउला यिनमा मानवीय चेतना ?
नेपालको संविधानको धारा ३८ मा रहेको महिलाको हकको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ ।’ ंतर त्यो कागजमा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा लागू हुँदैन । नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो वाक्य ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’भित्रको जनतामा नेपाली महिला पर्दैनन् भन्ने प्रमाण महिलाको सार्वभौम सत्ता अस्वीकार गरिएको तथ्य केही धाराहरूले स्पष्ट पार्दछन् ।
जसमध्ये भाग २ को धारा ११ को उपधारा ५ मा रहेको नागरिकताको हक एउटा हो । यस धाराले कुनै पनि महिला पुरुषमा निर्भर नभएसम्म उसको कुनै स्वतन्त्र पहिचान छैन भन्ने अर्थ दिन्छ । विवाह नै महिलाको लागि पहिचानको माध्यम हो भनेर महिलाको इच्छा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको परिभाषा नै सङ्कुचित पारिएको छ ।
मनु स्मृतिमा भनिएको छ, ‘विवाह दुई आत्माको मिलन हो ।’ विभिन्न धर्म दर्शनले पनि विवाहलाई पवित्र बन्धन मानेको छ । सिधा अर्थमा हेर्दा समाजलाई निरन्तरता दिँदै सृष्टिलाई चलायमान राख्ने काम विवाहबाटै शुरुवात हुन्छ ।
मानव विकासको प्रारम्भिक चरण आदिम साम्यवादी युगमा मान्छे घुमन्ते जीवन यापन गर्दथे । त्यसबेला महिला र पुरुषमा विभेद थिएन । सबै समूहमा बस्थे इच्छा र यौनिकतामा पनि स्वतन्त्रता थियो । जसलाई जोसँग हिँड्न, बस्न मन लाग्छ बन्देज थिएन । सबैभन्दा जेठी महिला वा आमा समूहको लिडर हुन्थिन् जो समूहको सबैलाई समान व्यवहार गर्थिन् ।
पुरुषले टाढाटाढाबाट खोजेर ल्याएको कन्दमूल र सिकार समान रूपले वितरण गर्थिन् र उब्रेको जगेडा गर्थिन् । जसको अवशेष अझै छ महिलाको हातमा डाडु पुन्यँु । त्यसको अर्थ मातृसत्ता भने होइन । त्यस समयमा मानिस २ चीजलाई पूजा गर्थे, प्रकृति र महिला । प्रकृति मानिसको वशमा थिएन र मान्छे प्रकृतिसँग डराउँथे । महिला बच्चा जन्माउँथी र समूहका प्रत्येक सदस्यलाई समभाव राख्न सक्थी । जब पुरुषले स्रोत र साधनमाथि कब्जा गर्न थाल्यो तब मन परेकी महिलामाथि पनि अधिकार जमाउन थाल्यो । महिलामाथि पुरुष आधिपत्यको शुरुवात भयो । मानवीयता पनि खण्डित हँुदै गयो ।
महिलाले पुरुषलाई किन परमेश्वर मान्छन् भनेर फ्रेडरिक एङ्गेल्सले गहन अध्ययन गरे र उनले आफ्नो पुस्तक ओरिजिन अफ प्राइभेट प्रोपर्टी अफ फेमेली एन्ड द स्टेट ( १८८५) तयार पारे । सो पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार महिलामाथिको विभेदको जड व्यक्तिगत सम्पत्ति र शक्ति नै हो । त्यसैले महिलालाई पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति नै ठान्छन् पुरुष । जसलाई आधिकारिक बनाउन विवाह नामक संस्थाको स्थापना भयो ।
यसलाई अनेक नामले पुकारिन थालियो । जन्मजन्मको नाता, दुई आत्माको मिलन, पबित्र बन्धन आदिआदि । तर भारतकी प्रख्यात महिलावादी कमला भासिन यो मान्न तयार छैनन् । सबैको जीवनमा विवाह पवित्र बन्धन बनेर रहन सक्दैन न त हुन्छ दुई आत्माको मिलन नै । जब पुरुषहरूलाई शक्ति र सम्पत्तिको नशाले गाँज्यो । सामन्तवादी युगको प्रादुर्भाव भयो र महिलालाई विवाहको बन्धनले बाँधेर एउटा आज्ञाकारी खेलौना बनाउन शुरु गरे जसलाई जति जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, फाल्ने वा खेलाउने । त्यस्तै भइन् सावित्री गुप्ता (नाम परिवर्तित) पनि ।
प्रत्येक नारीको जीवनमा विवाहले बद्लाव अवश्य ल्याउँछ । सावित्रीले पनि विवाहबाट आमा हुने सौभाग्य प्राप्त गरिन् । ममताको सिञ्चन गर्ने ठाउँ पनि पाइन् । मातृत्वको अपरामित अनुभूत गर्ने अवसर पनि पाइन् । तर, सङ्कीर्णताको सीमाले जकडिएको बन्धनबाट भने मुक्त हुन पाएन आमा हुनुको अर्थबोधले ।
आज होस् या आदिम युगमा होस् नारी जब आमा हुन्छे उसले आफ्नो सन्तानलाई मातृत्वको पखेटाले संरक्षण गरेर राखेकी हुन्छे । जसरी कुखुराको माउले चल्लाहरू छोपेर राख्छ त्यसरी नै । पशु होस् वा पंक्षी कुनै भालेले आफ्नो बच्चा संरक्षण गरेर हुर्काएको देखिँदैन ।
बच्चा जन्माएर झाडीमा फाल्ने आमाहरू पनि छन् । तिनीहरूको छुट्टै कथा छ, छुट्टै विवशता छ । त्यो विवशताको मूल जड पितृसत्तात्मक समाज नै हो । यसको मतलब बच्चा जन्माएर छोड्ने आमाको गल्ती छैन भन्ने होइन । तर त्यो बच्चाको बाबुलाई किन खोजिन्न ? आमालाई मात्र किन हुन्छ कारवाही ? त्यो आमा स्वीकार्छ यो पुरुषप्रधान समाज ? बच्चा हुर्काउनमा बाबुको भूमिका हुँदैन नै भन्ने होइन । आमा त धर्ती हो बीज खसे उम्रिने, प्राण र पोषण दिने । कल्पना गर्नुहोस् एउटा शिशुलाई जोगाएर हुर्काउन कति मिहिनेत र लगन चाहिन्छ । त्यति नै मिहेनतका साथ जोगाएर प्रत्येक आमाले बच्चा हुर्काएर अहिले यो विश्वभर साढे सात अर्ब मानिसको भीड जम्मा भएको छ ।
त्यसमा १÷२ लाख बालक सडकमा हुर्किए होला । केहीलाई बाबुले वा अरु कसैले हुर्काए होला तर जन्म त आमाले नै दिएको हो । सृष्टिको शुरुवातदेखि नै त्यति नै स्याहार र संरक्षण दिएर नै हुर्कियो होला मानिसको यो हुल । तर आमाकोे अवस्था भने सामन्तवादी प्राचीन युगमा र आज पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह छ ।
‘प्रभुको निगाह हो, म पुरुष पैदा भएँ नारी होइन’, आज भन्दा २ हजार ३ सय वर्षअघि ग्रीकका महान दार्शनिक सोक्रेट्सले भनेको यो वाक्यबाटै थाहा हुन्छ कि त्यस समय महिलाको अवस्था कस्तो थियो भनेर । अनेकौँ बन्धनहरूले विकृत बनाइएको थियो महिलाको व्यक्तित्व । जो सिर्फ उपभोगको वस्तु र काम गर्ने मेसिन अनि मान्छे जन्माउने साधन मात्र थियो । राज्यले यतिसम्म विभेद गर्दथ्यो कि महिलालाई नागरिकता पनि दिँदैनथियो न त दिन्थ्यो मानवको दर्जा नै ।
प्लेटोको समयमा महिलाको स्थान दासको समान पनि थिएन । दासले श्रम मात्र गर्नुपथ्र्यो तर महिलाले श्रम गर्नुका साथै उपभोगको साधन तथा बच्चा जन्माउने मेसिन सबै हुनुपथ्र्याे ।
महिलाको पनि जसरी नै शरीर बनेको हुन्छ । भोक र तिर्खा उस्तै हुन्छ । थकान र निद्रा उस्तै हो । पीडामा दुख्ने देह पनि उस्तै हा,े पीरमा बग्ने आँशु पनि उस्तै नुनिलो हुन्छ दुवैको । तर यो मर्का बुझ्दैन । पुरुष प्रधान समाजको दरिद्र मानसिकताले कहिल्यै समान देख्न सकेन महिलालाई । मझेरीदेखि आँगनसम्म र सडकदेखि सदनसम्म महिलाको हैसियत बरु सम्झाइरहन्छ ।
तिनै समाजका प्रत्येक मान्छेलाई ९ महिना गर्भमा राखेर दशधारा दूध पिलाएर मलमूत्र सोहोरेर हुर्काउने आमा नै हुन् । ती आमा पनि एक महिला हुन् भनेर चटक्क भुल्दछ मर्दश्रेष्ठ समाज । भर्खरै आमाको नाममा नागरिकताको सवालमा सदनमा उठेका कुरा र, त्यहाँ अभिव्यक्त भएका धारणाहरूबाटै प्रष्ट हुन्छ कि २१ औं शताब्दीमा पनि कति सङ्कुचित मानसिकताले ग्रस्त छ समाज ।
आफ्नो वा अरुको जसको भए पनि आमा त आमा हो । कतिपयका आमाप्रतिको लाज लाग्दो अभिव्यक्ति सुनेर यो लाग्दछ कि तिनले बुद्ध जन्माउने मायादेवी भुले, कृष्ण जन्माउने र हुर्काउने देवकी र यशोधरा भुले, जिसस जन्माउने मेरीलाई भुले र शायद आफैँलाई जन्माउने आमालाई बिर्से अनि आफूलाई आकाशबाटै झरेको सम्झिए होलान् ।
मातातीर्थ औँसीको दिन कतिपयले आमाको तस्बिर राखेर अनेकौं शब्दहरू आमाको सम्मानमा चढाएर पोस्ट गरे । कवि साहित्यकारहरूले आमाको बारेमा कति कविता लेखे, कति लेख्न बाँकी नै होला तर संसदमा चलेको बहसमा आमालाई केवल बजारु महिला मात्र ठानियो । महिलाका हक अधिकार उल्लेख गरिएका संविधानका पानाहरू देखावटी दस्तावेजजस्तो मात्र भए । जबसम्म लिङ्गको आधारमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको असमानता हटाई व्यवहारमा परिवर्तन गरिँदैन कुनै आमाको मुहारमा सन्तुष्टिको मुस्कान फक्रिन सक्दैन । आमाको मुहार नफक्रिएसम्म देश फक्रिन सक्दैन ।
असल सन्तान र असल नागरिक उही हो जसले आमा र राष्ट्रलाई समान दर्जा दिन्छ । यही नै आमाप्रतिको वास्तविक सम्मान हुनेछ । नत्र भने ‘यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ भन्ने श्लोकको रटान सुनाउनु बोक्रे सम्मानको दोसल्ला ओढाउनुजस्तो मात्र देखिन्छ ।
जबसम्म आमालाई बुबासमान व्यावहारिक स्वतन्त्रता र सम्मान दिन सकिन्नँ तबसम्म आमालाई सम्मान गरेको ठहरिँदैन । ‘तिमी मलाई एउटी असल आमा देऊ, म तिमीलाई एउटा असल राष्ट्र दिन्छु’ नेपोलियन बोनापार्टको यो भनाइबाटै थाहा हुन्छ कि आमाको दर्जा कुन हो ?
अलिकति फरक छ सावित्रीको व्यथा । आजभन्दा ३५ वर्ष अघि तराईको गाउँको एउटा गरीब परिवारमा सावित्रीे (नाम परिवर्तित) को जन्म भयो । बालविवाहको अत्यधिक प्रचलन रहेको त्यस गाउँमा उनको परिवार पनि अछुतो रहेन । छोरी भएकाले गर्दा पढ्न पाइनन् उनले । दाजुले पढे, भाइलाइ पढाए तर उनलाई विद्यालय पठाएनन् । १४ वर्षको कलिलै उमेरमा सावित्रीको विवाह भयो जसरी उनको दिदीको भयो ।
गरीबीको कारणले केटाको परिवारले मागेजति दहेज दिन सकेनन् उनका बुबाआमाले । त्यसकारण परिवारमा पनि खासै माया पाइनन् सावित्रीले । वर्षेनी गर्भवती भने तुल्याइदिए । कलिलै उमेरमा ३ सन्तानकी एक निरीह आमा बनिन् एउटी अनपढ बालिका । महिला हुनुको पीडा, बर्सेनीका ३ वटा सन्तान, परिवारबाट भएको बेवास्ता, अन्धविश्वास र कुरीतिको जालोले छपक्क ढाकेको समाजमा सावित्रीले कति सास्ती भोगिन् होला अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
उनको दुर्दशाको खबर माइतीसम्म पुग्यो तर पनि माइतीबाट कोही लिन गएनन् उनलाई । विवाहित छोरी पाल्ने क्षमता नभएर भन्दा पनि छोरीले घर खान नसकेको लाञ्छनाको डर थियो उनको माइतीलाई । छोरी जन्मिनु पाप र श्राप सम्झिने त्यो समाजमा माइतीबाट पनि साथ पाइनन् सावित्रीले । दुःखकै सागरमा पौडिन बाध्य भइन् उनी ।
उनको बिजोग अवस्था देखेर गाउँले महिलाहरू मिलेर नजिकैको गाउँमा आएको परिवार नियोजनको घुम्ती शिविरमा उनको मिनिल्याप गराइदिए । उनको श्रीमान्सँगै कपडाको घुम्ती व्यापार गर्ने र नाताले देवर पर्ने विनय (नाम परिवर्तित) को आँखाबाट भने सावित्रीको दुर्दशा लुक्न सकेन । उनले भाउजू र बच्चाहरू दाइ भएकै ठाउँमा पु¥याइदिए । विनयले गाउँमा नानीहरू र भाउजूको बिजोकको कथा सुनाउँदै आफैँसँग राख्न सल्लाह दिए दाजुलाई ।
सावित्रीका श्रीमान्ले २÷४ महिना त परिवारलाई आफूसँगै राखे तर केही समयपछि गाउँमै पु¥याइदिए । सावित्रीको जीवनमा फेरि दोहोरियो पुरानै दुर्दशा । उनले आफ्नो पेटको भोक त खप्न सकिनन् त्यो भन्दा बढ्ता बच्चाको भोक देख्न सकिनन् । देवर विनय गाउँ आएको बेला पछि लागेर श्रीमान् भएको ठाउँमा फेरि गइन् । उनका श्रीमान् रिसाए तर पनि सहेरै बसिन् ।
श्रीमान्ले केही बहाना नपाएर विनयसँगै आँखा लगाएर उनलाई गालीगलौज गर्ने र कुटपिटसमेत गर्न थाले । जब सहनुको सीमा नाघ्यो सानो छोरो च्यापेर घर छोडिन् । अरु दुई छोराहरूको बिजोग देखेर विनयले फेरि सावित्रीलाई खाजेर ल्याए तर पनि सावित्रीका श्रीमान्को हिंसाको शृङ्खला रोकिएन । अन्ततः उनी मर्न भनेर घरबाट निस्किइन् ।
विनयले यो थाहा पाएर सावित्रीको पछि लागे र आत्महत्या गर्नबाट बचाए । अन्ततः उनै देवरले सावित्रीलाई शरण दिए र विवाह पनि गरे । विवशताले दुईवटा छोरा आफूसँगै ल्याउन सकिनन् काखको बच्चा मात्र लिएर आइन् ।
दुःखसुख गर्दै समय बित्दै थियो । सावित्री आफू बसेको डेरा वरपरका केही घरहरूमा भाँडा माझ्ने, लुगा धुने घर सफा गर्ने काम गर्न थालिन् । विनय पनि केही कमाउँथ्यो । अर्काको जुठो भाँडा माझेर भए पनि बच्चालाई बोर्डिङ स्कुल हालिदिइन् । छुटेका दुई छोराहरूलाई बेलाबेला गोप्य रूपमा ख्याल राख्थिन् । माया त कत्ति लाग्थ्यो । आमाको मन न हो । तर आफूसँगै राख्ने चाहना भए पनि हरेक बाध्यताको बन्धनले जकडिएकी थिइन् उनी ।
यता, विनयको परिवारलाई मञ्जुर भएन यो विवाह । एक त सावित्रीले परिवार नियोजन गरिसकेकी थिइन् । विनय एक्लो छोरो थियो परिवारको । विनयका बाबुआमालाई विनयको आफ्नै सन्तान (छोरा) को मुख हेर्ने चाहना थियो । यो अस्वाभाविक पनि होइन ।
अन्ततः विनयलाई अर्को विवाह गर्ने दबाब आउन थाल्यो घरबाट । बिस्तारै विनय डेराबाट घर जाने क्रम बाक्लिन थाल्यो । सावित्रीलाई खबर नदिई विनयको दोस्रो विवाह गराइदिए उनको बुबाआमाले । न बुबाआमाले नै नागरिकता बनाइदिएका थिए सावित्रीलाई न पहिलो लोग्नेले बनाइदियो न विनयले नै बनाइदियो । आमाछोरा दुवै अनागरिक भए यो आफ्नै मुलुकमा । न दुई आत्माको मिलनले निरन्तरता पायो न पवित्र बन्धनले जीवन्तता पायो । पाइन् केवल त सावित्रीले दुइटै विवाहबाट निको नहुने चोट ।
अब कहिल्यै विवाह नगर्ने मनमनै कसम खाइन् उनले । दुःख कष्ट कति सहिन् हण्डर कत्ति खाइन् यो साबित्रीलाई नै थाहा होला । फेरि शुरु भयो दुःख र सङ्घर्षको कथा ।
जहाँ आफन्तहरू धेरै बसोबास गर्नुहुन्छ त्यहाँ सानातिनादेखि ठूला काममा भोज भतेरमा निमन्त्रणा आउनु स्वाभाविक हो । मलाई पनि आउँछ । भ्याएसम्म सामेल भइदिन्छु । यसै क्रममा सानातिना भोजमा खाना बनाउने काममा एक जना महिला प्रायः भेटिइरहन्थिन् । उनी सावित्री थिइन् । निम्न स्तरको काम गरे पनि हेर्दा निकै राम्री देखिने सावित्रीबारे जान्ने उत्सुकता हुन्थ्यो तर भीडभाडमा सोध्न भुलिहाल्थेँ । फेरि म आफ्नै हतारमा हुन्थेँ ।
मान्छेलाई बाँचुञ्जेल हतारले कहिल्यै छोड्दैन त्यसमाथि महिलाको त कुरै छोडौँ । महिलालाई नै सबै बितिरहेको हुन्छ । घरपरिवार, सासूससुरा, श्रीमान्, घरको काम जहिलै पनि उत्तिकै हतार । जतिसक्दो चाँडो जमघटबाट बिदा हुने तरखरमा म हुन्थेँ । त्यहाँबाट उम्किने ध्याउन्नमा सावित्री मेरो मानसपटलबाट ओझेल पर्थिन् ।
म मात्र होइन आजका मानिस त्यसमा पनि विशेष गरी शहरका मानिस जहिले पनि हतारमा हुन्छन् । मानौँ उसलाई कुनै म्याराथन जित्नु छ र विश्राम लिनु छ । जुन विश्रामको नजिक पुग्न मान्छे हतारमा हुन्छ तर विश्रामदेखि भने हमेसा भयभीत रहन्छ ।
सावित्रीलाई देख्दा लाग्दैन थियो कि उनको व्यक्तित्व अनुसारको पेशा सुहाउँदो छ । अर्थात् उनी निकै सुन्दर देखिन्थिन् । मेरो तात्पर्य सुन्दर मान्छेले निम्न पेशा गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ होइन । तर उनको त्यो बाध्यता थियो होला । अर्को विकल्प फेला पार्न सकेकी थिइनन् । दुःखसुख आमा छोराको गुजारा चल्दै थियो । खानलाउन र छोरालाई पढाउन पुगेकै थियो । छोराले राम्रै पढ्दै थियो ।
जब छोरा कक्षा ८ मा पुग्यो उनलाई छोराको स्कुलमा बोलाइयो र छोराको रजिस्टे«सन फर्म भर्न विवरण मागियो । बाबुको नाम सोधियो, त्यसको प्रमाण खोजियो, तर उनीसँग आमाछोराको पेट पाल्ने दुई हात र सिङ्गो शरीरबाहेक अरु केही पहिचानको प्रमाण थिएन न थियो त्यसको अनिवार्यताको ज्ञान नै । रजिस्ट्रेसन फर्म भर्नदेखि नागरिकता बनाउनसम्म बुबाको नाम र प्रमाण चाहिन्छ भने स्कुलका प्रिन्सिपलले । जन्मदर्ता वा अरु कुनै प्रमाणबिना रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न समस्या हुने बताए । उनले अरुतिरबाट पनि त्यही कुरा थाहा पाइन् ।
उनी ठूलो चिन्तामा परिन् । छोराको पढाइ अगाडि बढाउन मात्र होइन छोराको जीवनको हरेक क्षेत्रमा बाबुको नाम र नागरिकता चाहिने भयो । बाबुको नाम त थियो तर प्रमाण थिएन । छोराको आफ्नै बाबुलाई छोराको भविष्यको लागि जन्मदर्ता बनाइदिन अनुरोध गरिन् तर अंश माग्न आउँछ भनेर हो वा अरु नै कारणले हो उसको बाबु तयार भएन ।
विनयले आजीवन साथ दिने गरेको वाचा पनि साथै लिएर गयो । जीवनकै सबैभन्दा कठिन मोड यही भएको महसुस गरिन् साबित्रीले ।
केही समयअघि उनी सधैँ क्रियाशील रहने क्षेत्रमा सानो कार्यक्रमको निमन्त्रणा आयो । निम्तो मान्न गएँ । सावित्री भने देखिइनन् । त्यहाँ वरपर सोधखोज गरेँ । उनी वर्षौँअघि छोडेर आएको गाउँ गएको थाहा पाएँ । गाउँ जानुको कारण ८ कक्षामा पढ्दै गरेको उनको छोराको लागि आवश्यक कागज केही जुटाउन सकिन्छ कि भन्ने थियो । अन्ततः सावित्रीले अनेक झमेला बेहोरेर दाजुभाइलाई गुहारेर आफ्नो नागकिता बनाइन् तर छोराको लागि भने काम लागेन । बाबुकै नाम खुलेको प्रमाण नै चाहियो स्कुलमा । जुन जुटाउन हरसम्भव कोशिस गरिन् उनले तर पुरुषप्रधान समाजमा असफल भइन् ।
दुई वटै विवाहबाट धोका खाएकी थिइन् सावित्रीले । छोरा हुर्काएर त्यही छोराको साथमा बाँकी जीवन यत्तिकै बस्ने वाचा मनमनै गरेकी थिइन् । तर सोचेजस्तो भएन । अन्ततः त्यही छोराको भविष्यको लागि विकल्प खोज्न बाध्य भइन् सावित्री ।
धेरै सोचिन् । धेरै विकल्प खोजिन् तर कुनै विकल्प भेटिनन् । अन्तत मनमनै बाँधेका वाचा तोड्न बाध्य भइन् उनी । आखिर एउटै उपाय भेटियो त्यो थियो पुनर्विवाह । फेरि विवाह नगर्ने कसम खाएकी थिइन् उनले । आफूले जसका लागि जीवन समर्पित गरेर बसेकी थिइन् उसैको भविष्य अन्धकार देखेपछि सावित्रीको मातृत्वले सन्तानको लागि फेरि त्यो दर्दको अग्निकुण्डमा हामफाल्न बाध्य बनायो ।
आफ्नो छोरालाई बाबुको नाम दिन मन्जुर हुने एक जना हजुरबाको उमेरका वृद्ध विधुरसँग विवाह गर्न बाध्य भइन उनी । सावित्रीको यो त्यागको अभिभारा उनको छोराले तिर्छ तिर्दैन त्यो भन्न सकिन्नँ तर मातृत्वको अग्निपरीक्षामा भने उनी अब्बल उत्रिइन् । सावित्री एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनीजस्ता हजारौ पात्र छन् हाम्रो समाजमा जो सन्तानका लाग्ाि आफ्नो खुशी बली दिएर बाँचेका छन् । सावित्रीजस्ता ंआमाहरूको कथा कहिलेसम्म लेखिरहला यो समाज ?